မဟာဘုတ် | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
မဟာဘုတ်	← Older posts
# ဇွန်လအတွက် (၇) ရက် သားသမီး ဗေဒင်Published June 3, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	.
# တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ
သူ့ဖက်ကိုယ့်ဖက် မျှတအောင် ဆောင်ရွက်ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် အလုပ်အကိုင် အကြံအစည်များ အထမြောက် အောင်မြင်မည့် ကာလဖြစ်သည်။ အကျဉ်းအကျပ် အခက်အခဲကြုံနေသူများ အခက်အခဲများမှ လွန်မြောက်နိုင်မည်။ အပေးအယူ နှင့် အလွှဲအပြောင်း ကိစ္စများ အောင်မြင်ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမည်။ အလှူဒါန ပြုရန် ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်မည်။ ထီပေါက်ကိန်းရှိသည်။ (၃, ၅, ၇, ၀) ဂဏန်းများ ပါအောင်ထိုးပါ။ (ဘဏ် . . စသည်တို့မှ) ချေးငွေ ချေးငှားရယူနိုင်မည်။ လက်အောက်လူ ၊ တပည့်တပန်း အကျိုးပေးမည်။ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုများမှ အကျိုးအမြတ် ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည့် ကာလဖြစ်သည်။ မိမိကျန်းမာရေး နှင့် မိသားစုကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ အိုးအိမ် အပြောင်းအရွှေ့ အလုပ်အကိုင် အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်သည်။ ငွေကြေးကံ ကောင်းမွန်မည့် လ, တစ်လ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယတြာ - မွေးနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အုန်းသီးတစ်လုံးကို စီးဆင်းနေသော မြစ်၊ ချောင်း တစ်ခုခုအတွင်း စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။ Continue reading →
Posted in မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဇွန်လ ဗေဒင်, ဒီလ ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, လစဉ် ဗေဒင်, ဗေဒင်, ဗေဒင် online, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး | 11 Comments	# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင်Published May 2, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	.
အိုးအိမ်၊ အလုပ်၊ နေရာဌာန အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခုရှိနိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲအတွက် လူပန်းစိတ်ပန်းဖြစ်မည်။ မယူချင်သော တာဝန်များ ယူရတတ်သည်။ မိမိနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ဘက်များကို အနိုင်ယူနိုင်မည်။ ခင်မင်ရင်နှီးနေသော မိတ်ဆွေတစ်ဦး နှင့် မိတ်ပျက်တတ်သည်။ ရွှေ အ၀ယ်မှား/အရောင်းမှား တတ်သည်။ သတင်းမှား ကောလာဟလတစ်ခုကြောင့် စိတ်ဒုက္ခရောက်ရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လက်အောက်လူအချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ လက်အောက်လူ ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ သို့သော် အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်ပြောင်းလဲမှု များမည့်လ, ဖြစ်သည်။
ယတြာပြုလိုက – တန်ခိုးကြီး ဘုရားတစ်ဆူတွင် ရွှေသင်္ကန်းဖြစ်စေ (ရွှေသင်္ကန်း အလှူငွေဖြစ်စေ) ကပ်လှူလိုက်ပါ။ ယခုလတစ်လလုံး “၀က်သား” မစားပါနှင့်။ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်တတ်သည်။
Posted in မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဒီလ ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, လစဉ် ဗေဒင်, ဗေဒင်, မေလ, မေလ အတွက် ၇ ရက် သားသမီး ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး |4Comments	# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင်Published March 26, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဒီလမှာ အလုပ်အကိုင် တိုးတက်မယ်။ စီးပွားဖြစ်ထွန်းမယ်။ အိုးအိမ် အဆောက်အဦးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကံကောင်းမှု ရှိတတ်သလို ဒီ အိုးအိမ်ကိစ္စနဲ့ဘဲ ဆွေမျိုးညီအစ်ကိုများနဲ့ အမှုအခင်းလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီလထဲမှာ ထိခိုက်ရှနာ ၊ သွေးထွက်သံယိုမှု ၊ မီးဘေး သတိထားပါ။ လူ, လူချင်း ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှုများလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကား နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကံမကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ (Car Accident , ကားအရောင်းအ၀ယ် အရှုံးပေါ်ခြင်း , ကား အရောင်းအ၀ယ် အမှားဖြစ်ခြင်းများ သတိပြု)။
ဒီလထဲမှာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းပြီး ငွေကြေးခက်ခဲမှု ဖြစ်မယ်။ ငွေ မလည်တတ်ဘူး။ ငွေကြေး ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရပ်ဝေး ရပ်နီး ခရီးသွားလာမှုများ ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ သို့သော် စိတ်မအေးရသော ခရီးမျာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ပညာရေး မကောင်းနိုင်သေး။ အချစ်ရေး ကိစ္စများမှာ စိတ်ပူပန်ရခြင်း ၊ စိတ်နှစ်ခွ ဖြစ်ရခြင်းများ ကြုံမယ်။
= ယခုလအတွက် နာမည်မှာ တနင်္ဂနွေ စ,ပြီး အင်္ဂါ ဆုံးမှည့်ထားသူများ ထိခိုက်ရှနာ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု များ အထူးသတိပြုပါ။ ကိုယ့်ဘက်က အနာတရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ စ, ပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ သောကြာ ၊ စနေ တစ်ခုခုနဲ့ ပိတ်ထားသူများ ကံကောင်းမှု ပိုများနိုင်တယ်။ တနင်္လာ ၊ ကြာသပတေး ပိတ်ထားသူများလည်း ညံ့ပါတယ်။
= ယတြာပြုမယ် ဆိုရင်တော့ – သံဃာတော် (၃)ပါးကို ဆိတ်သားဟင်း နဲ့ ဆွမ်းကပ်လှူပေးပါ။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက် နေ့မှာ ငါးအရှင် သက်စေ့လွှတ်ပါ။ အိမ်မှာ ပျက်နေတဲ့ စက်ပစ္စည်းဟူသမျှကို လွှင့်ပစ်တန်ပစ် ၊ ရောင်းတန် ရောင်းထုတ်လိုက်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဒီလ ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, လစဉ် ဗေဒင်, ဧပြီလ, ဧပြီလ အတွက် ၇ ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး | 45 Comments	# မတ်လ အတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်း အကျဉ်းPublished March 1, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	(အပျင်းပြေဖတ်ရန်မျှသာ)
ဒီလမှာ လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်းဖြစ်မယ်။ တာဝန် ၀တ္တရား ကြီးမားမယ်။ ခရီးယာယီ ရှိတတ်တယ်။ အချစ်ရေး ကံကောင်းမယ်။ လုပ်ငန်း စီးပွား တိုးတက်မှု ရှိမယ်။ အင်္ဂါနံ စက်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကံမကောင်းဖြစ်မယ် (သို့) အင်္ဂါ သားသမီး ဒုက္ခပေးမယ်။ ဘုရားဖူးခရီး အပန်းဖြေခရီး သွားရတတ်တယ်။ အလှအပ နှင့် ဆိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခု လက်ဆောင်ရတတ်တယ်။
ကျန်းမာရေး ဂရုပြုရမယ်။ ရောဂါဟောင်း ထ, တတ်တယ်။ ဆွေမျိုးသားခြင်းများအတွင်း ကျန်းမာရေး နာရေး ကိစ္စပေါ်တတ်တယ်။ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ အိမ်မှာရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် စိတ်သောက ရောက်ရမယ်။ ထီပေါက်ကိန်း ရှိတယ်။ ငွေဝင်များမယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေဝင်လေ လူပင်ပန်းလေ ဖြစ်မယ်။
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဒီလ ဗေဒင်, မတ်လ, မတ်လ အတွက် ၇ ရက် သားသမီး ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, လစဉ် ဗေဒင်, ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး |2Comments	# နဂါးနှစ် လာပြီPublished January 29, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အထွေထွေ ဗေဒင်ပညာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများPublished January 2, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်တစ်ခုတော့ ပြောင်းပြန်ပြီပေါ့။ Happy New Year !!! ဆိုတဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အော်ဟစ်ကြတဲ့ အသံတွေလည်း သောသောညံ ခဲ့ပါပြီ။ 2012 ခုနှစ်ကို လူတော်တော်များများက ကံမကောင်းတဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်လိမ့်လို့ ပြောဆိုနေကြတဲ့ အသံတွေကတော့ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ကြားနေ ရပါတယ်။ ဒီနှစ်ဟာ လူသားတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ များနေတဲ့ နှစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၁၂မှာ ကမ္ဘာပျက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ကောလာဟလရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်) ဒါပေမယ့် ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ ပျော်ရွှင်စွာ ကြိုဆိုကြဖို့ကတော့ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား တွေရဲ့ တာဝန်ဘဲ မဟုတ်လားဗျာ။
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2012, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၂ ခု ဟောကိန်းများ, ၂၀၁၂ ခု ၁၂ရာသီခွင် အဟောများ, ၂၀၁၂ မြန်မာ ဗေဒင်	# သူတို့တွေ လွတ်မြောက်ကြတော့မည်Published September 30, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ရှေ့ကဆောင်းပါးမှာ အခု လ,ပိုင်း ရက်, ပိုင်းတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူအများ မမျှော်လင့် မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဇာတာအရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြောင်းလဲချိန် တန်နေပါပြီ။ ရှေ့ဆောင်းပါးမှာ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း အလှုပ်ရှား အရိုက်ခတ်ဆုံး သတင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ကားဟောင်း ၊ ကားသစ်” ကို ဆောင်းပါးလေးအနေနဲ့ တင်ဆက်ခဲ့ပါပြီ။
အခုတစ်ခုကလည်း လူအများ အတော်ကြီးကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ကိစ္စပါ။ ( . . . . . အကျဉ်းသားတွေ) ရဲ့ ကိစ္စပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ “နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမရှိဘူး” လို့ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ကြေငြာထားတော့ ကျွန်တော်လည်း ဒီအသုံးအနှုံးကို မသုံးလိုပါ။ ဒီတော့ “ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသောသူများ” လို့ နာမည်ပေးရရင် မကောင်းဘူးလား။ ဒီအသုံးအနှုံး လေးတော့ ပေးခွင့်ပြုကြပါဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ “ရာဇ၀တ် အကျဉ်းသားတွေ” မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကိုတော့ လူအများစု လက်ခံကြမှာပါ။
လူအများစုလိုဘဲ ကျွန်တော်လည်း သူတို့ကို လွတ်စေချင်တဲ့အထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်ပါ။ ဘာ နိုင်ငံရေး ခံယူချက် တစ်ခုခုကြောင့် မှ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရေးကို လည်း စိတ်ဝင်စားလှသူ တစ်ဦးမဟုတ်ပါ။ နောက်ပြီး အကျဉ်းကျ ခံနေရသူတွေ ထဲမှာလည်း ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားခြင်းတွေ မပါပါ။ ဒါပေမယ့် “လူသားခြင်း စာနာစိတ်” ကြောင့် လွတ်မြောက်စေချင်တာ အမှန်ပါ။ သူတို့ နှစ်ရှည်လများ ခံစားနေ ရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ကိုယ်ခြင်းစာမိပြီး လွတ်မြောက်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒပါ။ သူတို့ကို လွှတ်လိုက်ရင် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်နိုင် တယ် / မနိုင်ဘူး ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် မသိပါ။ ဒါက ကျွန်တော် နားလည်သော အခန်းကဏ္ဍ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့မှာ ရယူခဲ့တဲ့ “လွတ်လပ်ရေးဇာတာ” သာ အခုအချိန်အထိ အကျိုးသက်ရောက် နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူထုအုံကြွမှုတွေ” ထပ်မံ ဖြစ်ပွားစရာ အကြောင်း မရှိနိုင်တော့ဘူး လို့ဘဲ ကျွန်တော် သုံးသပ်ပါတယ်။ (ချွင်းချက်။ ။ ယခု သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော အစိုးရလက်ထက်တွင်သာ . . ) ဒီ ချွင်းချက်ကလေးတော့ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ့်ကို ချိုးချင်ဖဲ့ချင်နေကြတဲ့ သူတွေက အများသား။ မဟုတ်ရင် ဒီစကားကို ပုံသေ “တေးမှတ်” ထားပြီး ပြဿနာ ပေါ်လာရင် “၀ိုင်းတွယ်” မှာ ကြိုမြင်နေလို့။ တစ်ခါတစ်လေများ ဒီ ၀က်ဆိုဒ်ကို အပြီးအပိုင် ဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့တောင်မှ စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ထားပါတော့ လေ။ ဆောင်းပါး အကြောင်း ဆက်ပြောကြရအောင်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးဇာတာအရ -
အခုအချိန်ကာလဟာ “ဗြိစ္ဆာလဂ်” ပိုင်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် (၁၁)တန့် ဆိုတဲ့ “လာဘဘာဝ” အိမ်ရှင် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကြီး ဟာ (၂)တန့်ဆိုတဲ့ “ဓနကာရက” ဘာဝအိမ်မှာ (၁၀)တန့်အိမ်ရှင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကြီးနဲ့အတူ ရပ်တည်နေပြီး သူရဲ့ ထူလဒဿာ စ, ပြီး စားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားလာပြီး၊ ဥစ္စာဓန တွေလည်း ကြွယ်ဝ၊ ပြည်သူတွေလည်း ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝရတော့မယ့် အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ။ နောက်ပြီး ကောဇာဂြိုဟ်အရလည်း ဒီ (၂)တန့်ဘာဝမှာ ရပ်တည်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကြီး ကို သူ့အိမ်ရှင်ဂြိုဟ်ဖြစ်တဲ့ “ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကြီးက” ကောဇာခွင်မှာ မိဿရာသီကနေ တြိဂေါဏ အမြင်နဲ့ လှမ်းပြီး အထောက် အပံ့ပေးနေတော့ ဒီကာလမျိုးဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ ဘေးဥပဒ် မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ သို့ပေမယ့် တစ်ခု စဉ်းစားသင့်တာက မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဇာတာဟာ ယခုအချိန်အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသေးလားဆိုတာတော့ သံသယ ဖြစ်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက အစိုးရအဖွဲ့ (၆)ဖွဲ့လောက် ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ ဒီအစိုးရသစ်တွေ တက်,တက်လာတဲ့ အချိန် (ကျမ်းသစ္စာကျိန်တဲ့အချိန်) ရဲ့ ဇာတာခွင်တွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း ထည့်တွက်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် အတွေးအခေါ်တစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ မင်းဆက်တစ်ခု ပြောင်းသွားတာကို ထည့်မတွက်ဘူးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံး ပီပီပြင်ပြင် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ “အနော်ရထာမင်း” နန်းတက်တဲ့ ဇာတာကို ယခုအချိန်အထိ ဆက်ပြီး သုံးရဦးမှာလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ချိန်ရောက်မှ “မြန်မာနိုင်ငံ” ရယ်လို့ ပေါ်ထွန်းလာတာမဟုတ်ဘဲ ယခင့်ယခင်ကတည်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ရှိနေခဲ့တာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
Posted in ဟူးရားဗေဒင်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, အမှာ သတင်းစကား, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ကား ရောင်းမှာလား ၊ လဲ မှာလားPublished September 28, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
အခု လ,ပိုင်း ရက်, ပိုင်းတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူအများ မမျှော်လင့် မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်(အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပြီကိုး)။ ဒီအထဲမှာ လူအများ စိတ်အ၀င်စားဆုံး . . . လူတွေကို ဘာလုပ်ရမှန်းမသိအောင် ခေါင်းအစားဆုံး . . . ကိစ္စတစ်ခုကတော့ အများသိကြတဲ့အတိုင်း “ကားဟောင်း၊ ကားသစ်” ကိစ္စပါဘဲ။
ရုတ်တရက် “ကားဟောင်းတွေကို ဖျက်သိမ်းပြီး ပါမစ်အသစ် ချပေးတော့မယ်” ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်လာတဲ့ တပြိုင်နဲ့ အိုမင်း ဟောင်းနွမ်း စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ ကားအိုကားဟောင်း ပိုင်ရှင်တွေဟာ “အနေစုတ်ပေမယ့် ၊ ရွှေထုတ်တဲ့ မြပုဝါ” ဆိုတာလို ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ရုတ်တရက် “ထီ ထ, ပေါက်” တာလို့ဘဲ ပြောရတော့မှာပါဘဲ။ (၅)သိန်းနဲ့ ရောင်းရင်တောင်မှ ၀ယ်သူမရှိတဲ့ ကားတစီးဟာ သိန်း (၈၀) သိန်း (၁၀၀) ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုက ဒီသတင်းဟာ “တရားဝင် ထွက်ပေါ်မလာခင်” မှာ “လက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေး သမားတွေ” ရဲ့ လက်ထဲကို အရင်ဆုံး သတင်းရောက်နှင့် သွားတဲ့အတွက် မူလပိုင်ရှင်အချို့ဟာ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ဈေးကို မရလိုက်တော့ဘဲ အနစ်နာကြီး နစ်နာခဲ့ကြရပါတယ်။ တစ်ချို့ (၁၀)သိန်း (၁၅) သိန်းလောက်ဘဲ ရလိုက်ပါတယ်။ တရားဝင် သတင်းမထွက်ပေါ်ခင် ကားလိုက်ဝယ်သူ အများစုကတော့ အများသိကြတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်” တွေပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်စစ်တွေကတော့ “အရိုးအရင်းလောက်ဘဲ” ကိုက်လိုက် ရပါတယ်။ (သြော် - ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ် ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကိုယ့်ဆွေမျိုး အရင်းကြီးတွေဘဲ မဟုတ်လား။ မုဒိတာ ပွားပေးလိုက်ကြပေါ့ဗျာ)
Posted in မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, အမှာ သတင်းစကား, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# မဟာဘုတ် စစ်တမ်းPublished September 25, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
မဟာဘုတ်ပညာဟာ အခုအချိန်အထိ မြန်မာ့ဗေဒင်ပညာ “စစ်စစ်” လို့ သတ်မှတ်ခံထားရဆဲ ဖြစ်တဲ့ ပညာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ “မြန်မာ ၀ီကီပိဒိယ” ထဲမှာ ရေးသားထားချက်အရတော့ မဟာဘုတ်ပညာဟာ ဟိန္ဒူလက်ရိုး ဗေဒင်ပညာတွေရဲ့ အဆွယ်အပွားတစ်ခုလို့ ရေးထားသဗျ။ (ဘယ်သူဝင်ရေးသွားလဲတော့ မသိပါ) ။ ဒီရေးသားချက်ဟာ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဟိန္ဒူ နက္ခတ်ဗေဒင် စနစ်မှာ သုံးတဲ့ ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ပရိယာယ် တွေ နဲ့ လက်ဆန်း မဟာဘုတ်မှာ သုံးတဲ့ ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ပရိယာယ်ခြင်းမှ မတူတာဘဲ။ ဂြိုဟ်သက်တွေ၊ ဂြိုဟ်ရဲ့ အရောင်တွေ ၊ အရပ်ဒေသတွေ ၊ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ . . . စတဲ့ ယူဆပုံတွေ အများကြီးကို ကွဲလွဲပါတယ်။ (ပရိယာယ် ဆိုတာ ဗေဒင် အသုံးအနှုံးဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်က Definition ကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်)
စာရေးသူလည်း ဟိန္ဒူ ၊ အနောက်တိုင်း ဗေဒင်ပညာ ရှေးကျမ်းဟောင်း တော်တော်များများကို ဖတ်ဘူးပါတယ်။ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာမှာ သုံးတဲ့ “သူရဇ္ဇ၊ သောကြ၊ ဗုဒ္ဓ ၊ စနြေ္ဒာ ၊ သောရီ ၊ ဂုရု ၊ ဘောမ” ဆိုတဲ့ ဂြိုဟ်တွေကို ဆပွတ်အစီအစဉ်နဲ့ နေရာချထားတာကို ဟိန္ဒူ ရှေးဟောင်း ကျမ်းတွေမှာရော ၊ အနောက်တိုင်း နက္ခတ်ဗေဒင်ကျမ်း တွေမှာပါ တွေ့ဘူးပါတယ်။ ဒီကျမ်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ “တောင်တွင်းအကျော် ခင်ကြီးဖျော်” မမွေးခင်က ကျမ်းတွေ ပါပါတယ်။ Continue reading →
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဟူးရား မဟာကာလကြီး ဆိုတာPublished September 16, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာကာလကြီး ဗေဒင်ကို - မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ (ကေပီစနစ်) လိုဘဲ တွက်ချက်လို့ ရနိုင်တဲ့ နည်းစနစ်ကို ကျွန်တော် တီထွင်ထားတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်း ရေးနေတာ မပြီးသေးပါဘူး။ (ဆက်ပြီး မရေးဖြစ်တာပါ)။ ဒီပညာအကြောင်းကို ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ မကြာခဏ ပြောထားတာရှိတော့ နည်းပညာ အသစ် အဆန်းလိုလားသူတွေလည်း မချင့်မရဲ ဖြစ်နေကြတာကို ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ ဟူးရားမဟာကာလကြီးပညာနဲ့ တွက်ချက်မှုလေးတစ်ခုကို တင်ပြပေးပါမယ်။ လက်ရိုးအခြေခံ ရှိသူ (သို့) မဟာကာလကြီး အခြေခံရှိသူများတော့ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်သူတွေ အတွက်တော့ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ဆောင်းပါးလေးဟာ ပညာရှင်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လို့ဘဲ ဆိုရပါတော့မယ်။
ဒီ ဆောင်းပါး နဲ့ တွက်ချက်မှုလေးဖြစ်လာရပုံကို ပြောရဦးမယ်ဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ (၁၄)ရက်နေ့က စီစဉ်မထားဘဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ မကွေးတိုင်း “ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့ကလေး” ကို အလည်ပြန် ဖြစ်သွားတယ်။ သွားတုန်းကတော့ (၃) ရက် (၄)ရက်လောက်ဘဲ ကြာမယ်လို့ မှန်းထားတာ။ ဟိုရောက်တော့ ဟိုကိစ္စပေါ် ၊ ဒီကိစ္စပေါ် နဲ့ (၂)ပါတ်လောက် ကြာသွား ပါတယ်။ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ၊ ဗေဒင်မိတ်ဆွေတွေ အားလုံးနဲ့ တွေ့ရပြီး ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောရတာ အတော်စိတ်ချမ်း သာဖို့ ကောင်းတဲ့ ခရီးလေးတစ်ခုပါ။ Continue reading →
Posted in ဟူးရားဗေဒင်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဆပွတ်တစ်လုံး လိုရာသုံး . . .Published September 14, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
တစ်နေ့က 9/11 အမှတ်တရ ဆောင်းပါးကို ရေးရင်းနဲ့ ဒီဆောင်းပါးမှာ ပါတဲ့ “ဆပွတ်” ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ဆက်ပြီး ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ ရေးလိုက်ပါတယ်။
“ဆပွတ်ဂြိုဟ်” ဆိုတာ - တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ ကြာသပတေး ၊ သောကြာ ဆိုတဲ့ ဂြိုဟ် (၇)လုံး (နေ့ ၇နေ့) ရှိတဲ့အနက်က ဂြိုဟ်တစ်လုံးစီရဲ့ (၆) ခုမြောက်ဂြိုဟ်ကို “ဆပွတ်ဂြိုဟ်” လို့ ခေါ်တာဘဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ –
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ရဲ့ ဆပွတ်ဟာ (၆)ခုမြောက် သောကြာဂြိုဟ် (၁ < ၆)
တနင်္လာဂြိုဟ်ရဲ့ ဆပွတ်ဟာ (၆)ခုမြောက် စနေဂြိုဟ် (၂ < ၀) အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ ဆပွတ်ဟာ (၆)ခုမြောက် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် (၃ < ၁)
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ရဲ့ ဆပွတ်ဟာ (၆)ခုမြောက် တနင်္လာဂြိုဟ် (၄ < ၂)
ကြာသပတေးဂြိုဟ်ရဲ့ ဆပွတ်ဟာ (၆)ခုမြောက် အင်္ဂါဂြိုဟ် (၅ < ၃)
သောကြာဂြိုဟ်ရဲ့ ဆပွတ်ဟာ (၆)ခုမြောက် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် (၆ < ၄)
စနေဂြိုဟ်ရဲ့ ဆပွတ်ဟာ (၆)ခုမြောက် ကြာသပတေးဂြိုဟ် (၀ < ၅) ဆိုပြီး ဖြစ်လာပါတယ်။
အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာမှာ “ဆပွတ်ဂြိုဟ်” ဟာ အလွန်အရေးပါတဲ့ ဂြိုဟ်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ လင်္ကာလေး ရှိတယ်လေ။ “သူ့ကို နိုင်လို ဆ, ကိုခို ၊ လိုရာဆေးဖေါ်သုံး” တဲ့။ လက်ဆန်း ဗေဒင်ပညာလိုက်စားဘူးသူတိုင်း သိကြပါတယ်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	#9/ 11 အမှတ်တရ နှင့် အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာPublished September 12, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
တွက်ကြည့်မယ်ဆို (၁၀)နှစ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားသွားစေခဲ့တဲ့ အမေရိကန် World Trade Center တိုက်ညီနောင်ကို အိုစမာဘင်လာဒင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ “အယ်ခိုင်းဒါး” အဖွဲ့ အလစ်ဝင် တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့် တိုက်ညီနောင် နှစ်လုံးလဲ ဘုန်းဘုန်းလဲကျ ၊ လူအသက်ပေါင်း (၃၀၀၀)လောက် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ် မဟုတ်လား။
ဒီ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကြီးဟာ အဓိကအကြောင်းကတော့ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ရပေမယ့် ဒီ သေဆုံး ကွယ်လွန်သွားကြ သူတွေထဲမှာလည်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူတွေနဲ့ ဘာသာတူတွေ အမြောက်အများ ပါဝင်နေခဲ့တာ ကတော့ အလွန်ကြေကွဲစရာပါဘဲ။
အသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ လူ(၃၀၀၀)လောက်ဟာ သူတို့နဲ့ ရန်ညှိုးရန်စလည်း မရှိ ၊ လူခြင်းတောင်မှ မြင်ဘူး သိဘူးခြင်း မရှိ သူတွေရဲ့ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်မှု ကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ တကယ့် ကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုပါ။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများPublished August 5, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယခုလအတွက် တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ယခုလအတွက် ကိုယ်ပင်ပန်း ၊ စိတ်ပင်ပန်းမှု များမည့်လ, ဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်သောက များရမယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများမယ်။ ၀န်ထမ်းများ ရာထူးတက်ကိန်း ရှိပေမယ့် အလွန်တာဝန်ကြီးတဲ့ နေရာတွေကို ယူရတတ်တယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ရန် အတိုက်အခိုက်ပေါ်မယ်။ ငွေကြေးကံတော့ ကောင်းနေလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ ထီပေါက်ကိန်း ရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထီပေါက်ပြီးရင် Accident ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီလတစ်လလုံး စိတ်လေနေမယ်။ ငွေကြေးကိစ္စ အသုံးထက် အဖြုန်းက များနေတတ်တယ်။ လူမျိုးခြား ၊ ဘာသာခြား ဒုက္ခပေး ခံရ နိုင်တယ်။ ဒီလထဲမှာ အိမ်ကို လူအိုလူမင်း ၊ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေသူများ လာရောက်တည်းခိုလျှင် ကံမကောင်းလှတဲ့ နိမိတ် ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း လုပ်သူများ အလုပ်အကိုင်တိုးတက်ပြီး စီးပွားရေးမှာတော့ ထိခိုက်စရာ မရှိပါ။ ထူးထူးခြားခြား ငွေဝင် ကိန်းများပင် ရှိနေပါတယ်။ ကားဝယ်ရန် စီစဉ်နေသူများ ယခုလ ကားဝယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မြေအရောင်း အ၀ယ် လုပ်သူများအတွက် ယခုလမှာ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ မြေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာ တစ်ခုခု ၀င်နိုင်တယ်။ ခရီးသွားရန် ကြံနေသူများ ခရီးစဉ် ပျက်ခြင်း (သို့) နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေခြင်းများ ဖြစ်တတ်တယ်။ နာမည်မှာ နာမည်မှာ တနင်္ဂနွေ စ, ပြီး စနေ ဆုံးသူများ နှင့် ကြာသပတေး ဆုံးသူများ ယခုလ Accident နှင့် ကျန်းမာရေး ညံ့ခြင်းများ၊ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာများ ဖြစ်ကိန်း ရှိနိုင်တယ်။ သိပ်တော့ အားမပြင်းလှပါ။ ယတြာကတော့ - နှင်းဆီပန်း အနီရောင် (၉)ပွင့်ကို မွေးနေ့မှာ ဘုရားမှာ ကပ်လှူလိုက်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, MaHaBote, MaHaBote Astrology, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ် နှင့် မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်Published July 27, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ် (Sandra Bullock) ဆိုရင် မြန်မာပရိတ်သတ် တော်တော်များများ သိကြပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ 1990 ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ “Speed” ဇာတ်ကားမှာ မင်းသားချော “ကိနူးရိဗ် (keanu reeves) နဲ့ တွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒီ ဇာတ်ကားဟာ အလွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပြီး တက်သစ်စ မင်းသမီး ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ်ကိုလည်း လူသိများ ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။
ပထမ “Speed” ဇာတ်ကား အောင်မြင်တော့ ဆက်ပြီး Speed (2) , Speed (3) စသည်ဖြင့် ဆက်ရိုက်ခဲ့ပေမယ့် ပထမဆုံး Speed ကားလောက်တော့ အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားတွေဟာ စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် ဟောလီးဝုဒ် လောက တစ်ခုလုံး မက်မောကြတဲ့ “အကယ်ဒမီ” ဆုများကို တော့ ချိန်ရွယ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
တကယ်လို့ များ အဲဒီအချိန်တုန်းကသာ “အကယ်ဒမီ” ဆုကို ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ်ဟာ အသက် (၂၆)နှစ်လောက် သာ ရှိသေးတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့ တကယ့် အချိန်အခါကောင်းပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် “ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်ရ ၊ မဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ရတတ်တဲ့” လူ့ဘောင်လောကရဲ့ သဘာဝအတိုင်း ဆန်ဒရာဘူးလောဂ့်ဟာ သူသိပ်လိုချင်တဲ့ “အကယ်ဒမီ” ဆုကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသ ခဲ့တဲ့ (Blind Side) ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ကျမှ ဆွတ်ခူး ရရှိပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အချိန်မှာ သူ့အသက်က (၄၅) နှစ် ပြည့်ပြီးလို့ (၄၆) နှစ်ထဲကို ၀င်နေပါပြီ။ အရွယ်နှောင်းနေပါပြီ။ အကယ်ဒမီ အရှိန်အ၀ါ ရှိပေမယ့်လည်း ရှေ့အနာဂါတ်အတွက် လူကြီးခန်းတွေမှာဘဲ သရုပ် ဆောင်ဖို့ရဖို့ များနေပါပြီ။
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# လက်ထပ်မယ်ဆို ၊ ရက်မြတ်ဘယ်လိုPublished October 24, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
မနေ့က ကွန့်မန့်ထဲမှာ စာဖတ်သူတစ်ယောက်က “အခုအချိန်ဟာ သီတင်းကျွတ်ပြီမို့ မင်္ဂလာဆောင်သင့်တဲ့ ရက်ကောင်းရက်မြတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှောင်ရန်/ဆောင်ရန်” လေးတွေ ရေးပေးပါဆိုလို့ ဒီပို့စ်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါ့ဗျား။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ၀ါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ – လာလိုက်တဲ့ မင်္ဂလာ ဖိတ်စာတွေ၊ များလိုက်တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေ (၀ါတွင်း (၃)လုံး “အောင့်ထား” ရသလား မှတ်ရတယ် )။ ပလူကို ပျံလို့။
တခြားလတွေကော မင်္ဂလာဆောင်လို့ မရတော့တာ ကျနေတာဘဲ။ “ကျွတ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါလို့ “လူပျို၊ အပျို” ဘ၀တွေကနေ ကျွတ်ကြ၊ လွတ်ကြအောင် “နိမိတ်ယူ” ကြတာနဲ့ တူပါတယ်။
အောင်မယ် – သီတင်းကျွတ်ရင် ပြီးတာဘဲ ဆိုပြီး ဆောင်ချင်တဲ့ရက် ဆောင်ကြတယ်လို့တော့ မအောက်မေ့လေနဲ့နော်။ ရက်ကောင်း ရက်မြတ်ကလေးတော့ ရွေးပြီး ဆောင်ကြတာဘဲဗျ။ ဗေဒင်ဆရာ ရွေးပေးတဲ့ ရက်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဆရာတော် ရွေးပေးတဲ့ ရက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဒီလိုတော့ လုပ်ကြပါတယ်။ “ဆရာတို့ ၊ ဘုန်းဘုန်းတို့ ကောင်းတယ်ဆိုရင် ပြီးတာပါဘဲ” ဆိုတဲ့လူ များပါတယ်။ (တကယ် ကောင်းမကောင်းတော့ ဘယ်သူမှ သေသေချာချာ မသိကြပါဘူး)
Posted in မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,776)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,425)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,204)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,047)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,072)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,385)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,208)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,713)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,753)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,408)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,356)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,216)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,164)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,414)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,091)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,908)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,763)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,756)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,292)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,896)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,788)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,744)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,614)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,568)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,354)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,183)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,162)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,064)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !